I-Chikii APK Ukulanda Kwe-Android [Inguqulo Yakamuva]
Kukhona osanda kungena enkundleni yemidlalo yamafu omakhalekhukhwini. Ibizwa nge-Chikii APK. Uma ungumthandi wegeyimu, ungalibali ukujoyina lo mphakathi.
Umhlaba wemidlalo usilethela izinto eziningi. Kuwukuzijabulisa. Indlela yokuxhumana nokuxhumana nabanomqondo ofanayo. Futhi indlela yokuthuthukisa ubuciko bengqondo nokuguquguquka phakathi kwezinye izinto eziningi.
Yingakho silapha namuhla ngohlelo lokusebenza olukhethekile oluzokusiza ukuthi uthole abantu ababelana nge-craze efanayo. Ungalanda inguqulo yakamuva yalolu hlelo lokusebenza mahhala kusuka lapha. Jabulela.
Yini i-Chikii APK?
I-Chikki App ikulethela yonke imidlalo yekhompyutha kumakhalekhukhwini wakho nge-PC Cloud Game Group. Joyina futhi udlale izinkulungwane zabadlali ukuze ujabulele imidlalo yakho eyintandokazi noma kuphi, nganoma yisiphi isikhathi, noma kuphi.
Bonisa imidlalo ye-PC ehamba phambili esikrinini sakho se-Android esiphathwa ngesandla ngaphandle kokuthenga noma ukusebenzisa ikhompuyutha yokudlala eningi nebizayo noma i-PS4. Ngale nketho, ubani odinga ukuhambela imfashini endala? Masibhukude negagasi elisha.
Ngokwabenzi be-Chikki MOD APK, lona umphakathi ongcono wamageyimu wamafu, ongcono nakakhulu kunamagama abusa imakethe njenge-Stadia. Ukuze uthole lokho, kuzodingeka ukuzitholele yona kuqala.
Umphakathi ubukisa kakhulu ukwakha kanye neqembu labasebenzisi begeyimu elingcono kakhulu emhlabeni we-inthanethi. Akufanele uphuthelwe yithuba lakho lokuba yingxenye yalo.
I-Chikii APK Engine ikunikeza ukufinyelela kuyo yonke imidlalo ye-PC edumile nethrendayo. Uzothola abadlali abaningi babelana nge-PC yabo, nama-consoles wegeyimu. Vele ujoyine futhi ube yingxenye yephathi egcwele ubumnandi.
Lokhu kufaka phakathi imidlalo emangalisayo njenge-GTA5, Jump Force, Witcher III, Naturo Storm 4, Just Cause 3, NBA 2K19, Absolution, Hitman, Fifa 19, kanye neDead by Daylight.
Usayizi 51 MB
Igama lephakheji com.dianyun.chikii
Iyadingeka i-Android 5.0 nangaphezulu
Izici ze-Chikki App
le nkundla yokudlala yamafu yamadivayisi akho aphathwayo iletha iqoqo lezinketho ezimangalisayo nezici. Nazi ezinye, esingathanda ukuthi wazi. Ungathola okwengeziwe ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza.
Finyelela kuwo wonke amakhompuyutha ahamba phambili futhi udlale imidlalo yesiteshi kusuka kufoni yakho.
Yiba yingxenye yeqembu labasebenzisi begeyimu engcono kakhulu
Joyina futhi udlale noma nini.
Yiba yingxenye yanoma yimiphi imidlalo eshiwo ngenhla.
Uhlelo lokusebenza lusekela ikhibhodi yesibambo ukuze iqalise igeyimu.
Inkinobho yokusetha ngokuzenzakalelayo ngokucushwa okugcwele kwayo yonke imidlalo.
Inketho yokufaka kungobo yomlando, qhubeka negeyimu kusukela ngesikhathi ugcina ukuma ngaso.
Ungalanda kanjani futhi ufake i-Chikii APK?
Lolu hlelo lokusebenza kulula ukuthola nokulufaka kuma-smartphones noma amaphilisi wakho we-Android run. Kudinga ukulandela izinyathelo ezimbalwa.
Uma usudlule kuzo i-Chikki MOD APK izoba sefonini yakho futhi uzolungela ukujabulela noma yini oyikhethayo. Ukuze kube lula kuwe, silandele izinyathelo. Vele uwalandele njengoba unikiwe.
Njengesinyathelo sokuqala, kuzodingeka uthephe inkinobho ethi ”˜Landa i-APK' ekupheleni kwalesi sihloko. Lokhu kuzoqala inqubo kuwe futhi isikhathi esithathiwe sincike esivinini se-inthanethi.
Okwamanje, iya kuzilungiselelo zokuphepha zedivayisi yakho bese uguqula ”˜Imithombo Engaziwa' ukuze ”˜Vumela'. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ufake izinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle ngaphandle kwalezo zesitolo sokudlala.
Uma inqubo yokulanda isiqediwe. Iya kunkomba yokugcina bese uthola ”˜Chikii APK'.
Thepha kuyo bese ucindezela ”˜KULUNGILE’ izikhathi ezimbalwa. Lokhu kuzofaka uhlelo lokusebenza.
Buyela esikrinini se-Android futhi uthole isithonjana sohlelo lokusebenza lwe-Chikki. Ngena ngemvume bese uphuthuma kumdlalo owuthandayo. Uma uchitha izinhlamvu zemali, ukungena kuzoba ngokushesha. Uma kungenjalo, kuzodingeka ukuthi ulayini nabanye futhi ulinde ithuba lakho.
I-Chikii APK iyiqembu le-PC Cloud Game ukudlala yonke imidlalo engcono kakhulu evela kulowo mhlaba ngqo kumakhalekhukhwini wakho. Joyina izinkulungwane zabantu khona kanye ku-smartphone yakho ye-Android futhi ujabulele amageyimu amahhala. Vele uthephe isixhumanisi esinikezwe ngezansi.
Izigaba Apps, Social Amathegi I-Chikii APK, Uhlelo lokusebenza lwe-Chikki, Chikki MOD APK Imeyili kwemikhumbi
I-PicaShow Apk Ukulanda Kwe-Android [Ama-movie + Nochungechunge]
Ukulanda kwe-Dodo IPTV Apk Kwe-Android [Live TV]